Ndị na -ebubata ndepụta nri, ndị na -ebubata ya - China na -emepụta ụlọ ọrụ premix factory
4% etiti ezi nri na-enye afọ ojuju ọdịnaya KG ọ bụla VA IU 60,000-162,000 Fe g 1-8 VD3 IU 25,000-125,000 Cu g 0.125-0.625 VE mg≥ 600 Zn g 1-2 VK3 mg 15-150 Mn g 0.25-3.5 VB1 mg Se 20 Se mg 3-12.5 VB2 mg≥ 160 I mg≥ 10 VB6 mg≥ 25 L-lysine % ≥ 3.9 VB12 mg≥ 0.3 Ca % 8-20 Nicotinic acid mg≥ ...
4% ezì na-enye ara ara na-ebuputa ọdịnaya KG ọ bụla VA IU 80,000-175,000 Fe g 1.2-8 VD3 IU 30,000-125,000 Cu g 0.15-0.625 VE mg≥ 1000 Zn g 1.2-2.5 VK3 mg 30-250 Mn g 0.35-3.5 VB1 mg≥ 30 Se mg 4-12.5 VB2 mg≥ 100 I mg≥ 10 VB6 mg≥ 40 L-lysine % ≥ 2.5 VB12 mg≥ 0.4 Ca % 10-20 Nicotinic acid mg≥ 600 tatol P % 1.5-4 D-Pantothenate mg ≥500 Nacl % 8-15 Folic acid mg≥ 120 ...
A na-eme premix site na mineral, vitamin na trace elements, a na-etinyekwa ọtụtụ ihe mgbakwunye dị ka enzymes, amino acid, mmanụ dị mkpa, ihe ọkụkụ, wdg. Premix bụ ihe dị mkpa maka nhazi nri. Ọ na -emezigharị ma na -ahazi akụrụngwa, iji gboo mkpa anụ ụlọ. Anyị na -enye premix, ihe mgbakwunye nri ọbọgwụ, ihe mgbakwunye nri oyi akwa na nwa nwoke. N'ihi na ọtụtụ afọ azụmaahịa mba ofesi, ụlọ ọrụ ahụ tolitere ruo nyocha, imepụta, na ire. Anyị na ngwaahịa exported ka ọtụtụ mba, ...
ngwakọta premix multivitamin ntụ ntụ
Anyị na -enye premix, ihe mgbakwunye nri ọbọgwụ, ihe mgbakwunye nri oyi akwa na nwa nwoke. N'ihi na ọtụtụ afọ azụmaahịa mba ofesi, ụlọ ọrụ ahụ tolitere ruo nyocha, imepụta, na ire. A na-ebuga ngwaahịa anyị n'ọtụtụ mba, dịka Australia, Canada, Mid-east, USA, UK, wdg Anyị nwere ike iji OEM/ODM mee ya. na -emepụta premix ọkọlọtọ, nke ndị otu nzụkọ anyị mepụtara. Anyị nwekwara ike mepụta usoro ahaziri iche maka ndị ahịa anyị, dị ka akụrụngwa ha dị, ụdị, na usoro nke t ...
A na-eme premix site na mineral, vitamin na trace elements, a na-etinyekwa ọtụtụ ihe mgbakwunye dị ka enzymes, amino acid, mmanụ dị mkpa, ihe ọkụkụ, wdg. Premix bụ ihe dị mkpa maka nhazi nri. Ọ na -emezigharị ma na -ahazi akụrụngwa, iji gboo mkpa anụ ụlọ. na -emepụta premix ọkọlọtọ, nke ndị otu nzụkọ anyị mepụtara. Anyị nwekwara ike mepụta usoro ahaziri iche maka ndị ahịa anyị, dị ka akụrụngwa ha dị, ụdị, na usoro ntopute nke anani ...
PIG PREMIX 4% PREGNANT Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, ọla kọpa sulfate, Zinc sulfate, manganese sulfate, sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, carbonate carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease wdg. ...
PIG PREMIX 4% EZI PIGLET Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, ọla kọpa sulfate, Zinc sulfate, manganese sulfate, sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease etc. DOSAGE By. ..
5% nri ọbọgwụ mmiri ara ehi INGREDIENTS Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, ọla kọpa sulfate, Zinc sulfate, manganese sulfate, sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease etc. DOSAGE By. ..
premixes bụ ngwakọta agwakọtara nke ọma. A na -emepụta ihe egwu a dabere na mkpa nke ụdị niile, gụnyere anụ ọkụkọ, ehi, ewu, atụrụ, ezì na kamel. Nkwado DufaMix dị na ọnụego ntinye sitere na 0,01% ruo 2,5%, niile dabere na mmasị ndị ahịa. Nsonye nke ụcha, enzymes, ihe nkedo mycotoxin na ndị na -atọ ụtọ bụ naanị ihe atụ ole na ole nke ihe mgbakwunye nri iji gbakwunye na ngwakọta nke ga -emezi ndepụta ahụ, site na ịgbakwunye uru na imepụta nzọ ...
concentrates bụ ngwakọta nke vitamin niile achọrọ, mineral, trace elements na mgbakwunye dị ka antioxidants, pigments na enzymes agwakọtara na protein na -agbari ngwa ngwa. A na -emepụta mkpokọta protein na -adabere na mkpa nke ụdị niile, gụnyere anụ ọkụkọ, anụ na anụ ezi. Isi nri dị na ntinye nsonye site na 2,5% ruo 35% nke nri zuru oke, ha niile dabere na mmasị onye ahịa. A na -emepụta ihe mejupụtara itinye nri dabere na ...
na -emepụta premix ọkọlọtọ, nke ndị otu nzụkọ anyị mepụtara. Anyị nwekwara ike wepụta usoro nkeonwe maka ndị ahịa anyị, dị ka akụrụngwa ha dị, ụdị, na usoro nke anụmanụ. Ọnụ mgbakwunye nke premix anyị dị iche site na 0.1% ruo 5% maka ebumnuche dị iche iche (achịcha, homogeneity nke premix, mmegharị na ngwaọrụ mmepụta, nchekwa nri, wdg). Anyị na -akwado 2.5% premix. Ime mgbanwe anyị nwere ike ịza ihe achọrọ maka obodo ọ bụla (premix, top feedi ...
5% onye na-emepụta broiler na-eri nri prex INVEDIENTS Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, VitaminB6, Vitamin B12, Nicotinic acid, D-Calcium pantothenate, Folic acid, D-biotin, Ferrous sulfate, Copper sulfate , Zinc sulfate, Manganese sulfate, sodium selenite, Calcium iodate, DL-Methionine, L-lysine hydrochloride, Calcium hydrogen phosphate, Choline chloride, sodium chloride, calcium carbonate, calcium bicarbonate, phytase, Lactobacillus phytate, mannanase, protease wdg .. .